ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဒုတိယသုံးလပါတ် အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း (၁၁) ခု။ - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဒုတိယ သုံးလပါတ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နိုင်စေရန် နှင့် မွေးဖွားရ လွယ်ကူစေရန် လေ့ကျင့်ခန်းများကို စတင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အကြံပေးချက်များသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် လ တစ်လ စီ အတွက်မတူညီသော လေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်ပြီး မိမိရင်သွေး ကျန်းမာနေစေရန်အတွက်လဲ အကျိုးပြုသည်။
အားကစားရုံတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် စက်ဘီးစီး လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီအချိန်တွင် ဝမ်းဗိုက်ကြီးလာခြင်းသည် ပုံမှန်ထက် သွေးလည်ပတ်မှုကို နှေးကွေးစေသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် အကြောဆန့်ခြင်း နှင့် ပတ်လက်လန်နေခြင်း တို့ပါဝင်သော ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများကို ကန့်သန့်ထားသင့်သည်။ ညအိပ်သော အခါတွင်လည်း ဘေးဘက်သို့စောင်းကာ အိပ်သင့်သည်။
ရေကူးခြင်းသည် ဒီအချိန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ရေထဲတွင် သင့်တင့်သော ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းသည် သက်တောင့်သက်တာဖြစ်နေစေသည်။ သို့သော် အလွန်အမင်းရေကူးခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ဒီအချိန်တွင် အသားရည်သည် နေရောင်ခြည်ကို ထိခိုက်လွယ်သဖြင့် နေကာလိမ်းဆေးများ အသုံးပြုသင့်သည်။
ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွက် Kegel လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းကို လိုအပ်သည်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းသည် ဆီးစပ်နေရာတဝိုက်အတွက် ပြုလုပ်ရသော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီး မွေးဖွားရလွယ်ကူစေသော အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိစေသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းသည် တစ်နေ့အတွက် ၂ မိနစ် မှ ၃ မိနစ်သာ ကြာမြင့်သော ညှစ်ခြင်း နှင့် လျှော့ခြင်း များဖြစ်သည်။ ဆီးသွားစဉ် အသုံးပြုသော ကြွက်သားများကို ၃စက္ကန့် ညှစ်ထားပြီးနောက် ထိုကြွက်သားများကို ၃ စက္ကန့် ပြန်လျှော့ထားရန် ဖြစ်သည်။ အကြိမ်ရေအတွက် များလာသောအခါ ကြာမြင့်ချိန်ကို ၅ စက္ကန့် မှ ၁၀စက္ကန့် (သို့) ပို၍ကြာသည်အထိ တိုးမြင့်ပြီး ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လဲကျစေနိုင်သော (သို့) ဝမ်းဗိုက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် မူတည်သေးသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့် လရင့်လာသည် နှင့်အမျှ ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်စွမ်းသည် လျော့နည်းလာသည်ကို သတိပြုရမည်။ အောက်စီဂျင် ရရှိနိုင်မှုနည်းသော တောင်ပေါ်ဒေသများကို သွားသည့် အခါတွင်လည်း အထူးဂရုစိုက်သင့်သည်။ ဥပမာ- အမြင့်ပေ ၈၀၀၀ ကျော်သော ဒေသများကို သွားလျှင် ရင်သွေးငယ်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်။
အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းအချို့သည် ကိုယ်ဝန်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အပန်းဖြေပန်းခြံများရှိ စီးနင်းနိုင်သည့် အရာများ–
ရေလွှာလျှော နှင့် အပန်းဖြေပန်းခြံရျိ အခြားစီးနှင်းစရာများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက် လုံးဝမသင့်တော်ပေ။ အရှိန်ဖြင့် ဆင်းသက်ခြင်း နှင့် ရုတ်တရက် သွားခြင်း နှင့် ရုတ်တရက်ရပ်တန့်ခြင်း များသည် ရင်သွေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ စက်ဘီးစီးခြင်းသည် မွေးလာ်မည့် ရင်သွေးငယ်အတွက် မသင့်တော်ပေ။ အတွေ့အကြုံရင့်သော စက်ဘီးစီးသမား ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ပထမသုံးလပါတ်ထိ စီးနင်းနိုင်သည်။ ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်စွမ်း အားလျော့လာခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ စက်ဘီးစီးခြင်းကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ သို့သော် အိမ်တွင်း (သို့) အားကစားရုံအတွင်း စက်ဘီးစီးသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများသည် အန္တရာယ်ကင်းသော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။
ဘောလုံး၊ ဘတ်စကတ်ဘော၊ ဘောလီဘော၊ ဟော်ကီ စသည့်အားကစားတို့သည် ဘောလုံးနှင့် ထိခိုက်ခြင်း၊ ရိုက်တံ နှင့် ထိခိုက်ခြင်း ၊တယောက်နှင့် တယောက်ထိခိုက်တတ်ခြင်း နှင့် လဲကျစေနိုင်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်တတ်သောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ကို အန္တရာယ်ရှိစေသည်။
ရေနှင့် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် ရင်သွေးငယ်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်။
နှင်းလျှောစီးခြင်းသည် ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာများကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း လုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ပြေပြစ်သော လျှောစောင်းများကိုသာ ရွေးချယ်သင့်သည်။ သို့မဟုတ် ပြင်ညီနှင်းလျှောစီးခြင်းကိုသာ ပြုလုပ်သင့်သည်။
ချော်လဲနိုင်ခြင်း နှင့် ဝမ်းဗိုက်ကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် မပြုလုပ်သင့်ပါ။
မြင်းစီးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေလျှင်တောင် မပြုလုပ်သင်ေ့သာ အားကစားဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်လနုစဉ် မြင်းလမ်းလျှောက်သည်ကို စီးနင်းခြင်းလောက်သည် အလွန်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရေနွေးပူစိမ်ခြင်း နှင့် ချွေးထုတ်ခန်း-
ရေနွေးပူစိမ်ခြင်း နှင့် ချွေးထုတ်ခန်းတွင်း ထိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စော အပူလွန်ကဲခြင်းသည် သန္ဓေသားလောင်းကို မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် အပြေးသမားမဟုတ်လျှင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်အတွင်းလည်း မပြေးသင့်ပါ။ တနည်းဆိုလျှင် အတိုင်းအတာတခုနှင့်သာ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ သုံးလပတ်မှစ၍ ချောလဲနိုင်ချေလဲများသဖြင့် သတိထား၍သာ ပြေးသင့်သည်။ အားကစားအားလုံးအတွက် အပူလွန်ကဲမှုဖြစ်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ရမည်။ ရေများများသောက်ပြီး ချွေးထွက်၍ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကို ကာကွယ်ရမည်။
လုံးဝရှောင်ကျင်သင့်သည်။ သွေးကြောအတွင်းသို့ လေပူဖောင်းများ ဖြစ်နိုင်ပြီး ရင်သွေးအတွက် အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ချော်လဲနိုင်ချေ နှင့် ဝမ်းဗိုက်ကိုထိခိုက်နိုင်ချေ အလွန်များသည်။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် တင်းနစ်ကစားလေ့ရှိလျှင် သိပ်မပြင်းထန်သော တင်းနစ်ကစားခြင်းသည် အဆင်ပြေသည်။ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ဟန်ချက်ထိန်းခြင်း နှင့် ရုတ်တရက်ရပ်တန့်ခြင်းများတွင် အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အတော်များများသည် ဝမ်းဗိုက်ပိုကြီးလာသော ဒုတိယ နှင့် တတိယ သုံးလပတ်များတွင် တင်းနစ်ဆော့ခြင်းသည် ခက်ခဲသည်သည်ဟု ပြောကြသည်။
What activities should I avoid during pregnancy? http://www.babycenter.com/404_what-activities- should-i-
What Exercises Should Be Avoided During Pregnancy? http://www.webmd.com/baby/exercise-during-
Week-by- Week Workout Tips: Second Trimester. http://www.whattoexpect.com/pregnancy/keeping-fit/photo-
gallery/week-by- week-workout- tips-second- trimester.aspx
What Exercises are Safe in the Second Trimester?. http://www.healthline.com/health/pregnancy/second-